မြက်ရိုင်းထဲက ကြေးရုပ် | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
စိတ်တောင်မကောင်းဘူး အမရယ်... လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာ ဖခင်ကြီးကို ဂုဏ်ပြုချင်တာတောင် မလွတ်လပ်တဲ့ ဘ၀ဖြစ်နေပြီနော်.........
လေးစားစွာ ကဗျာလေးကို ခံစားပြီး ဖတ်သွားပါတယ် မမိုးချိုသင်းရေ။
ဆရာ့ရဲ့ ကဗျာတွေကို မင်းကြီးလမ်းမှာ နေကတည်းက တလေးတစားနဲ့ မှတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။ အခုမှ အမကို ဆရာ့သမီးမှန်း သိရလို့ပါ။
လွတ်လပ်ရေးရဲ့ ဖခင်ကြီးရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ဖျောက်ဖျက်ထားလည်း ကြာပြီပေ့ါ။
နွားအုပ်ကြီးထဲ ငါလည်းပါတယ် ထင်ပါရဲ့။ စာရွက်လိပ်လေး ဖြုတ်ပြီး ရောင်းမစားတာ တခုပဲ ..
မြက်ရိုင်းတွေကို မျက်နှာလွှဲမိလေသလား လို့လဲ လွတ်လပ်ရေးဗိသုကာကြီးကို ရှက်ရွံ့အားနာ မိပါတော့တယ်။....ဟုတ်ပါတယ်လေ..။
ရင်ထဲအသည်းထဲကလာတဲ့ ကဗျာမို့ထင်ပါရဲ့ လှပ်ခနဲနေအောင်ခံစားရပါတယ်
ကိုယ့်ကိုကိုယ် မြက်ရိုင်းလိုလို၊နွားလိုလို စိတ်ထဲထင်လာတယ်..
စိတ်ထဲ မကောင်းစရာ...း(
ကဗျာဖတ်ပြီး မျက်စိထဲမှာလည်း ကြေးရုပ်ထုကို မြင်ယောင် မိနေတယ်။ သူတို့ ဘယ်လောက်ဖျောက်ဖျောက် ရင်ထဲတွေမှာ အမြဲ ကမ္ဗည်းတင်နေမှာပါ..။
ထင်ရင်မှားလိမ့်မယ် Geo politic
ကြောင့် British က Asia က ဆုတ်
အမ ကျွန်မ ကြားဖူးတာကတော့ ဒေါ်ခင်ကြည် ကိုယ်တိုင် အုတ်မြစ်ချပေးခဲ့တဲ. ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်နှစ်ခုရှိတယ်တဲ. ... နတ်မောက်မြို.ကကြေးရုပ်ရယ် .. အင်းစိန်-အောင်ဆန်းမြို.ကကြေးရုပ်ရယ်လို. ပြောတယ်.... တစ်နေ့ကျရင်တော့ ကျွန်မတို့ချစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ. ကြေးရုပ်တွေကို သန့်သန့် ရှင်းရှင်း သပ်သပ် ရပ် ရပ်နဲ. ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှာပါ...
ဆရာကြီးရဲ့ ကဗျာလေးကို ဖတ်ရအောင် ဖေါ်ပြပေးတဲ့ မချိုသင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ဖတ်ပြီးတော့ ရင်ထဲ နင့်နေအောင် ခံစားမိတယ် ။
ဒီယုန်မြင်လို့ဒီခြုံထွင်ထားကြတဲ့ မုဆိုးကြီး တသိုက်ကတော့ အဆိပ်လူးထားတဲ့ မြှားပေါင်းများစွာ နဲ့ အကွက်ချောင်းနေကြတာမို့ 
မြက်ရိုင်းတွေထူလေ ၊နွားတွေများ လေ ကြိ်ုက်လေပဲ ပေါ့ မချိုသင်း ရေ ..
ဗိုလ်ချုပ်လက်ထဲက ကြေးစာလိပ်လေး သူခိုးတွေက သံရည်ကြိုလို့ ကျဉ်ဆံလုပ်လိုက်ကြလို့ ကြေးရုပ်နားတောင် ဘယ်လူမှ မကပ်ရဲတော့ပါဘူး။
The latest said...
အထက်ပါ Comment ကိုမှားတယ်လို့တော့မဆိုပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကိုတော့မလေးစားလို့မရဘူးလေ။ ဗိုလ်ချုပ် တိုင်းပြည်အတွက်အနစ်နာခံခဲ့တာတွေကို ပြည်သူတွေမျက်မြင်တွေခဲ့ကြတာပဲ။
ဗိုလ်ချုပ်ကို တနိုင်ငံလုံးနီးပါးက ထောက်ခံခဲ့ကြတာပဲလေ။
တိုင်းပြည်တပြည်ဟာ စည်းလုံးညီညွှတ်မှုရှိမှ တိုးတက်မှာလေ။
ဗိုလ်ချုပ်က နိုင်ငံစည်းလုံးရေးကို အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့လိုလည်း British ကဖြုံသွားတာပေါ့။
British just leave Burma, they never wanted us to be united and independence country. What Bogyoke achieved at that time is something that was affected and feared by Supreme Power Countries which we can be proud of endlessly.
I really wish we can be proud of being Myanmar again. I never ashamed of being Myanmar but I don't getachance to be proud.
ကဗျာလေးဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာ နင့်ကနဲခံစားရတယ်..
မျက်ရိုင်းထဲက ကြေးရုပ်ကိုလဲ မျက်စိထဲ ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း မြင်ယောင်လာမိတယ်..
မြက်ရိုင်းတောထဲ ကိုယ်မပါမိအောင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားမိပါတယ်...
ဗိုလ်ချုပ် နဲ့ ဆရာ့ကို လေးစားခြင်းများစွာနဲ့ 
နွားပဲဖြစ်ဖြစ် မြက်ရိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် သဘာဝတရားအရ ဖြစ်လာရတာ...
ရှက် စ ရာ မ ဟုတ် ပါ ဘူး လေ...
ကိုယ်တို့တွေက “ကြေးသူခိုး” တွေမှမဟုတ်ကြတာ...
အဲ့ဒီကြေးရုပ်ကို ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းတောင်မသိတဲ့ မျိုးဆက်သစ်လေးတွေ များလာတော့မယ်အမရယ် .... T.T
အာဇာနည် ကျောက်တိုင် တွေ တောင် တချို့မြို့တွေမှာ ဖြိုလှဲ ရောင်းချ စားသောက် နေကြပြီပဲ..။ ဗိုလ်ချုပ်ရေ.. ရင်မနာ နိုင်တော့ဘူး..
ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့နေ့ ကို မျှော်ကာ မြက်ရိုင်းကို မျက်နှာလွှဲနေမိသလား။
ကျနော်လည်း မြက်ရိုင်းထဲက ဗိုလ်ချုပ်ကို တွေ့ဖူးတယ်အစ်မ။ အဝေးကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ နေပြည်တော်ဆိုတဲ့ ပျဉ်းမနား ရှမ်းကန်ထောင့်က ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံဆိုတဲ့ ပန်းခြံ ကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာပါ။ ကျနော် ဘလော့ဂ်မလုပ်ခင်ကပေါ့။ ဒါနဲ့ ရင်ထဲမှာ တနုံ့နုံ့ ခံစားနေရလို့ ရုပ်ထုများအကြောင်းဆိုပြီး အက်ဆေးလေး တစ်ပုဒ်ရေး ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်း အားလုံးကို မေးလ်ပို့ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်မှုများလားတော့ မသိဘူးပေါ့။ ကျနော် ပို့ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ မြက်ရိုင်းတွေ ရှင်းနေတာ တွေ့ရတယ်။ မဟုတ်နိုင်မှန်း သိပေမယ့် ကျနော့်စာကြောင့်လို့ ဂုဏ်ယူချင်တာတော့ အမှန်ပဲ အစ်မရေ။
အဲဒီအက်ဆေးလေးကို ပြန်ရှာလို့ ရရင် ပို့ချင်ပါတယ်။
တန်ဖိုးရှိတဲ့သူမှ တန်ဖိုးထားရမဲ့အရာကို တန်ဖိုးထားတတ်ကြပါတယ်။
စိတ်မကောင်းဘူးအစ်မရာ.. ကဗျာလေးဖတ်ပြီးတော့ရော။ ကဗျာရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေး ဖတ်ပြီးတော့ရောပေါ့..
ဗိုလ်ချုပ်တို့ကျဆုံးချိန်ရောက်တိုင်း မိုးဖွဲထဲမှာလေ..၊
ရောက်တဲ့ နေရာမှာပဲ လူသူ စက်ယဉ် တေါအကုန်ရပ်ပြီး
ဥသြ တွေဆွဲ လို့ညိမ်သက်စွာ ယမ်းနဲ သတိရခြင်း အထိမ်း
အမှတ်နဲ့ နေနောကပေမဲ့အားလုံးရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာ
မျက်ရည်စ တွေနဲ့ ပါလို့ ။ အခုတော့တဖြည်းဖြည်း ပုံပြင်
မြင်းစီးထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆိုရင် နောင်လာနောက်သားများက cowboy လို့တောင်ထင်ကြမလားမသိဘူး....း(((
အမ မာယာမှာဖတ်ပြီးမှ ဒီရောက်လာတာ။ ဆရာကဗျာ ကောင်းလွန်းလို့ မျက်ရည်တောင်ဝဲမိတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း မျက်ရိုင်းတွေကိုမျက်နှာလွှဲခဲ့မိတယ် ထင်ပါရဲ့။
I like so much most of poems of poet, Tin Moe.
Some are still kept in my heart.
We had learned Tin Moe's poems as compulsory subject of Myanmar Literacy.
We never forgot about General Aung San.
Let me copy above heartbreaking poem.
ရုက္ခစိုး မိုက်ကို လာဖတ်ပါဦး အစ်မရေ ..
သမိုင်းဆိုတာဖျောက်လို့ရတယ်ထင်နေကြတာပါ သခင်အောင်ဆန်းရဲ့ မြန်မာပြည်ကို မြန်မာပြည်သူတွေကို ချစ်တဲ့အချစ်ကို မဖျောက်နိူင်ကြပါဘူး...
နောက်ဆုံး ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းကို မသိကြဘူးထားပါတော့ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီးထွေးက မြန်မာပြည်သူတွေ လွတ်လပ်ရေးအတွက် သမိုင်းအသစ်ရေးပြီး ကမ္ဘာက ချစ် လူထုက ချစ်နေကြပါပြီ..သေနတ်တွေနဲ့တော့ လူတွေကိုဖိနှိပ်လို့ပဲရမှာပါ..သမိုင်းကို ဖိနှိပ်လို့တော့ မရပါဘူး..
ကဗျာလေးက ခေတ်ရဲ့ပုံရိပ်ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်အောင် ပြောပြတယ်နော်။
ညီမ နားမလည်တာ တစ်ခုရှိတယ် တကယ်ဆိုရင် နေ၀င်းလဲ တိုင်းပြည်အပေါ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ့ ခေတ်တုန်းကဆိုရင် မူကြိုမှာလဲ ဗိုလ်ချုပ်ကဗျာ၊ ကျောင်းကဗျာ ပြိုင်ပွဲမှာလဲ ဗိုလ်ချုပ်ကဗျာ၊
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့ ဆိုရင်လဲ အလံတစ်ဝတ်လငြ့် ပြီး ဥသြဆွဲသံကို ရေဒီယိုက ကြားရတယ်။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တို့ ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်အတွက် ဒီလိုလုပ်နေရတာကို ၀မ်းသာပီတိဖြစ်တယ်။
အခုတော့ သေသွားတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းအကြောင်းကို အသံမှ မဟရအောင် ဘာလို့ လုပ်နေကြတာလဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်က သေသွားတဲ့ လူကို သူတို့ ဒီလောက်ထိ ကြောက်နေသလား။ အင်း ဒါကိုက ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ကောင်းစားစေချင်တဲ့ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တဲ့ စိတ်စွမ်းရည်က အခုထိ ရှင်သန်ကြောင်း သက်သေပြတာ နေမှာနော်။
ကျွန်မက ဒီကဗျာကို ဆရာဦးတင်မိုးတို့ စာပေဟောပြောပွဲမှာ ဟောပြောခဲ့တဲ့ အခွေထဲမှာ စပြီး နားထောင်ရပါတယ်။ ဆွံ့အနားမကြားအတွက် ဟောပြောကြတာ စာရေးဆရာမဂျူး၊ ဆရာကြီးဦးတင်မိုးနဲ့ နောက်တယောက်က ဘယ်သူလဲမသိဘူး သုံးယောက် ဟောပြောထားတဲ့ အခွေနားထောင်ဖူးတယ်။ ဒီကဗျာလေးကို စာသားအနေနှင့် အခုပြန်ဖတ်ရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ချိုသင်းရေ… ရင်ထဲမှာ ထိရှခံစားရတယ်… မြက်ရိုင်းတွေထဲက ကြေးရုပ်နံဘေး ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရောက်သွားသလို ယူကျုံးမရဖြစ်မိတယ်… ခုဆို အဲဒီကြေးရုပ်လေး မြက်ရိုင်းတွေ ဖုန်းပြီိးမြင်မှမြင်လို့ ရပါဦးမလားတွေးမိတယ်…
လွတ်လပ်ေ၇းဖခင်ကြီးကိုလည်း သတိတရ ရှိနေဆဲပါ မရယ်။။
ချွတ်စွပ်ပဲလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ကော်တာပဲ
မမကို အားရပါးရ လွမ်းပစ်လိုက်မယ်။
ချိုသင်းရေ...ဘယ်လိုပဲ ဖျောက်ဖျက်ပါစေ...အားလုံးရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲကတော့ ဆွဲထုတ်လို့ ရနိူင်ပါဘူးလေ...
မမရေ..ကဗျာဖတ်ရင်း ရင်ထဲမှာ ထိထိရှရှခံစားရပါတယ်။ ညီမတို့ရဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်အတွက် မြက်ရိုင်းတွေ ဘယ်တုန်းကမှ မလွှမ်းခဲ့တာ အသေအချာပါ။
ရုပ်ထုက ကြေး စာ၇ွက်ကို ဖြုတ်ရောင်းတာ လဲ အောင်ဆန်းမြိုးက လူတွေ ဘဲနေမှာပေါ့ ဗျာ
မြက် မရှင်းတာကတော. အဲဒီ ရပ်ကွက်က လူတွေ အလုပ်မ လုပ် ဘူးဆိုတာ သိတာနေတယ်နော် ။
မြက် တွေ ထနေတယ် ဆိုတာတော. နိုင်ငံတော်ကြီးနဲ မဆိုင်လောက် ဘူးထင်တယ်ဗျာ
အမြင်မတော်ရင် ခင်ဗျားတို. သွားပြိး
ရှင်းပေးလို. ထောင်ထဲ မထည်.လောက် ဘူးလို. ထင်ပါတယ် ဘာလို. မ ဟုတ်တာတွေ ပြောနေကြတာလဲ
လုပ်သင်.တာ လုပ်ကြစမ်းပါ ။ အာတွေ ဘဲ ရီုက်မနေနဲ. ။
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ကဗျာလေးတွေကို ငယ်ငယ်ကတည်းက ရွတ်ရင်း သူ့အပေါ်လေးစားအားကျစိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်ကောင်းမွေးဖို့ အလေ့အထကောင်းရခဲ့တယ်လို့ အခုချိန်မှာ ပြန်သုံးသပ်မိတယ်။
ဆရာကြီးဦးတင်မိုးအသံကို တခါပဲ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ နားထောင်ဖူးခဲ့တာ။ အသံအရမ်းချိုတာ
အဲဒီကဗျာရွတ်သံလေးကို တင်ထားပေးရင် ကောင်းမှာနော် မချိုသင်း...
ခေတ်တခေတ်ရဲ့ အဖြစ် (ပြောရရင်တော့ အပျက်ပါ) ကိုမှတ် တမ်းတင်ထားတဲ့ကဗျာလေးပဲ အမရေ...တချိန်မှာ သမိုင်းဖြစ်လာမှာ မို့...ကျွန်တော်တို့ သည်းခံရဦးမှာပေါ့...
တူလေးငယ်ငယ်က ပြောဖူးတာ သတိရမိတယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်က အဆဲသန်တယ်တဲ့၊ တကယ်ပဲ ဆရာဆရာမတွေကို အဲဒီလို သင်ပေးဖို့ ညွှန်ကြားထားကြလားမသိနိုင်ဘူး၊ တူလေးကို တော်တော်ရှင်းပြခဲ့ရဖူးတယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်က ဘယ်လိုလူမျိုးဆိုတာ၊ ပျဉ်းမနားမှာငယ်ငယ်တုန်းက ရှမ်းကန် ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်မှာ အာဇာနည်နေ့ညတိုင်း လွမ်းသူ့ပန်းခွေတွေအများကြီး သွားကြည့်နေကြ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်က မဲမဲမှောင်နေပေမဲ့ အမေရှင်းပြခဲ့ဖူးလို့ မကြောက်ခဲ့၊ ချစ်ခင်လေးစားခဲ့ကြတာ၊ အခုတော့ အဲဒီအစဉ်အလာက လွမ်းစရာဖြစ်သွားပါပြီ၊
ကဗျာလေးကို ဖတ်ရင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်၊ ချစ်ခင်လေးစားလျှက်
မောင်ချောနွယ်ရဲ့ကဗျာစာသား အပိုင်းအစလေးကို ကျနော်ချန်ထားရစ်ခဲ့မယ်နော်အစ်မ-ဘာတဲ့--
၁၉၉၀ခုနှစ်၊ မေလရွေးကောက်ပွဲကို သတိရသောအားဖြင့်--
အခုဖြစ်နေတာတွေကို ကြားထား သိထားတော့ ဆရာကြီးကဗျာကို ဖတ်ရတာ ရင်မှာ နင့်နေတာပါပဲ။ အာဇာနည်စိတ်ဓာတ် နှင့် လုပ်ရပ်ကို လေးစားတတ်သူတွေ ရှိနေ သေးသ၍၊ ကျေးဇူးတရားကို သိတတ်သူတွေ ရှိနေသေးသ၍ ပြည့်သူ့အသဲမှာ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဆက်ရှိမြဲ ရှိနေဦးမှာပါ။ အဲ မျက်ရိုင်းတွေကို ကြည့်တိုင်းယဉ်တဲ့ အလှဆင် မြက်လေးတွေ ဖြစ်အောင်တော့ ဝိုင်းပြုစုကြရမှာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလိဲုပြုစုကြတဲ့ မမိုးချိုတို့ သားအဖကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မမိုးချိုရေ . . . အထက်မှာ မမိုးချိုးလို့ မှားသွားတာ အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်။ နာမည်စာလုံးပေါင်း မမှားဖို့ အရေးကြီးတယ် ဆိုတာ သိပေမဲ့ မှားသွားပါတယ်။
ိဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကမှ ကျမတို့မန်မာတစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ တကယ့်ဗိုလ်ချုပ် စစ်စစ်ပါ။ ဘယ်တော့မှ မပျောက်ပျက်နိုင်တဲ့ အစစ်အမှန် တစ်ခုပါ မချိုသင်းရယ်။ ဆရာ့ကဗျာလေးကိုဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာူမက်ရိုင်းပင်တွေ နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ် ကိုမင်ယောင်မိတယ်။
အမ မိုးချိုေ၇ အမမင်္ဂလာဆောင် မှာ ဘဘ ၇ဲ့လက်ဖွဲ့ကဗျာလေးကိုဖတ်ပြီး နာမည်ကိုစ၇င်းနှီး၇ပါတယ်။ ဘဘကိုတော့ ဖန်မီးအိမ်နဲ့ပေါ့။ဘဘ၇ဲ့သမီးပီသစွာကဗျာ၊စာပေ၊နိုင်ငံအေ၇းတို့မှာတတပ်တအားထမ်းပေးနေ တဲ့အမ ကိုလေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်ခင်ဗျာ။၇ိုး၇ိုးအဖိုးကြီး၇ဲ့သမီး၇ိုး ၇ိုးအမတွက်ကျွန်တော်တို့မြေဟာအမြဲတမ်း စိမ်းလန်းနေမှာပါ။မောင်ငယ် နေလင်း။
ဘယ်အရာမှ မြဲမြံမှု မရှိတာ တရားသဘောပါ..
ဒီလို မြင်ရတဲ့ အခြေအနေလဲ တနေ့သောအခါ ပြောင်းရမှာပါ.. အစစ်အမှန်ကိုဖုံးထားလဲ မရပါဘူးနော်..
တကယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ သူမှ တကယ့်လူဖြစ်တာပါ...
ကောင်းပါတယ် ဗျာ ..အလယ်ရောက်လာပါတယ် အွန်လိုင်းလောက ထဲကိုရောက်လာတာ မကြာသေးပေးမဲ့ အခု လိုစာလေးတွေ ဖတ်ရတာ သိပ်ပြီး ဂုဏ်ယူမိသလို အလည်းကျမိပါတယ် .. နောက်လည်ူး အလည်လာလာအုန်းမယ်နော် ခွင့်ပြုပါ
အင်း သမိုင်းနာလို့ နာမှန်းမသိ
လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးနဲ့ ကဗျာ့ ဖခင်ကြီးတို့ ငြိမ်းချမ်းမြင့်မြတ်သောဘုံဘ၀မှာ ချမ်းမြေ့ကြပါစေ